Qeyb ka mid ah Ciidamada Kenya oo lagu bedelayo Ciidamo ka socda Sierra Leone – idalenews.com
Midowga Afrika ayaa shaaca ka qaaday in qeyb ka mid ah Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ee jooga Kismaayo iyo deegaanada Jubooyinka lagu bedeli doono Ciidamo ka socda Sierra Leone oo dhowaan ku soo biiri doona howl galka.
Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Mohamed Saleh Annadif oo shalay booqasho ku soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo Ciidamada ka socda Sierra Leone ay noqonayaan guutadii u horeysay ee Soomaaliya loo soo diro.
Mr Annadif ayaa sheegay in horay Midowga Afrika u balan qaaday in Ciidamo Kenya qeyb ka mid ah la bedeli doono, isla markaana haatan Kenya ay ka joogaan Soomaaliya ilaa 2.500-askari.
Dhinaca kale Ciidamo ka tirsan dowladda oo dhowaan lagu soo tababaray gudaha Kenya ayaa soo gaaray Kismaayo, kuwaasoo bilaabay inay si tartiib tartiib ula wareegaan goobaha ay saldhiga ku leeyihiin ciidamada ee ku yaala meelaha muhiimka ah ee Kismaayo.
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo saaka howl galo ka wada Dayniile iyo Hodan